Ụlọ ahịa Apple ọhụrụ na -achọ imeghe ụzọ ya na Hunan | Esi m na mac
A ga -emepe ụlọ ahịa Apple ọhụrụ na Hunan
N'agbanyeghị inwe ụlọ ahịa anụ ahụ 42 na mba ahụ dum, ụlọ ọrụ Cupertino na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ịgbasa ọnụnọ ya na mba ahụ. Apple ekwuputala, site na weebụsaịtị ya, nke ga -emepe na Changsha, ọkachasị na ala mbụ nke International Financial Center, na mpaghara Furong.
Changsha bụ isi obodo mpaghara Hunan nke ihe karịrị nde mmadụ asatọ bi n'ime ya. Ihe onyonyo nke ụlọ ahịa Apple ọhụrụ a E biputere ya na Weibo ọ na -egosikwa anyị ma facade na ọnụ ụzọ ime ụlọ nke ogige dị na ya. Banyere ụbọchị mmeghe, ekwuputabeghị ya n'ihu ọha.
Kemgbe ọnwa Julaị, Apple amalitela ọrụ nnukwu nkwalite na mpaghara azụmaahịa site na mmụba 78% na -enye ọrụ, nke bụ na mgbakwunye na nke emegoro n'afọ a, ka GlobalData siri kwuo.
Ebe nchekwa data nyocha onye isi data na -ekpughe na ọkwa ọrụ Apple mụbara 78% na July 2021, ma e jiri ya tụnyere Julaị 2020, yana ihe karịrị 370 nke ọkwa ọrụ ndị a metụtara "Apple Retail". N'ụzọ na -akpali mmasị, Apple amụbaala ọkwa ọrụ na -ezo aka na "ngwaahịa ọhụrụ," site na ọrụ 130 na Machị 2021 ruo ihe karịrị 270 ọrụ na July 2021.
Maka ụlọ ahịa Apple ọhụrụ a nke ga -emepe ụzọ ya n'oge adịghị anya na China, anyị ga -eme ya tinye nke ọhụrụ nke ga -emepe ụzọ ya na Wuhan Na Septemba, dị ka anyị gwara gị ụbọchị ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Store » A ga -emepe ụlọ ahịa Apple ọhụrụ na Hunan
Nke a bụ otu ị ga -esi rụọ njikwa njikwa ụwa niile na MacOS Monterey beta 5
Akwụkwọ ntuziaka Apple II nwere akwụkwọ ozi Steve Jobs ka a na -ere ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 800.000